Ndezvipi zvinhu zvinoshandiswa kugadzira mawiricheya akakosha kudaro? | Karman® Mawiricheya
Ndezvipi zvinhu zvinoshandiswa kugadzira mawiricheya akakosha kudaro?
zhinji mavhiripu zvakagadzirwa ne zvinhu sesimbi, aluminium, rabha, plastiki, uye upholstery. Zvinhu izvi chengetedza a High quality uye kudzivirira iyo wiricheya kubva pakuputsa pakutanga muhupenyu hwayo.
How the zvinhu anoshandiswa:
A wiricheya ine simbi zvikamu kuti ibatsire kubata pamwe zvakanaka. Ruzhinji rwe wiricheya yakagadzirwa aruminiyamu nekuti chikuru chinhu chi aluminium furemu. rabha inoshandiswa pachigaro chemaoko, mamwe mavhiri, uye Push handles. apo chikweshe inoshandiswa kazhinji mu mawiricheya emagetsi kugadzira chivharo chakavharika chikamu chemagetsi emagetsi. Iyo inoshandiswawo kubatsira kugadzira kutaridzika kwakasarudzika uye nekuipa chitarisiko chiri nani. Pakupedzisira, upholstery inoshandiswa kugadzira chigaro chinobatsira kutsigira wiricheya vashandisi uye kupa nyaradzo.
Humwe hutano zvinobatsira yezvinhu:
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa mu wiricheya zvakare inoita chinzvimbo chakakosha mukunyaradza uye hutano. Iyo upholstery inoshandiswa kuwedzera nyaradzo ne kudzivirira kupisa kuunganidzira mugumbo uye pekugara nzvimbo. Zvimwe zvinhu wakunda 't kudzivirira kupisa kubva kuunganidzwa munzvimbo idzodzo zvichikonzera vashandisi kudikitira uye kusagadzikana zvakanyanya.
Kugara muunyoro kwenguva yakareba kunogona kukonzera hutachiona. Izvi zvakajairika munguva yezhizha nekuda kwekupisa. Izvi zvinoita zvakakosha nokuti wiricheya to kugadzirwa nezvinhu zvinobatsira kufefetedza kupisa. Upholstery inoshandiswa nekuti chinhu chinogara kwenguva refu icho chakaoma kutambanudza uye hachizoneti nyore nyore. Kubvumira kuti igare kwenguva yakareba kupfuura zvimwe zvinhu.
Rudzi rwe Rubber inoshandiswa zvakare zvakakosha nekuti zvichabatsira kumhanya
zvakanaka uye kupa rutsigiro zvemaoko asina kubvaruka kana kubvaruka zviri nyore kana achishandiswa zuva nezuva. Sezvakaita mamwe mavhiri emukati akaita kubva zvirinani Rubber, iyo inowedzera kuti mavhiri anogara kwenguva yakareba sei. Ichava nemhedzisiro pamushandisi nekuti zvakanyanya kuramba iyo Rubber inofanirwa kuchema, mavhiri mashoma anowanzo shandurwa. Aya maficha ese madiki asi achiri ane simba rakakura pane iyo wiricheya nevashandisi vayo ku kuvandudza mararamiro avo.
Kukosha kwakazara kwezvinhu izvi:
Zvikonzero zvekuti nei izvi zvinhu zvakakosha nekuti zvinobatsira kuona iyo unhu uye inogona kukanganisa kubatsira kwechigaro uye iyo hwose a wiricheya. Chikamu chese che wiricheya inoongororwa isati yaungana kuti ive nechokwadi chepamusoro mhando inogoneka. Vanhu vanoshandisa midziyo kubatsira kuisa zvikamu chaizvo pachigaro, asi havagone kuvimba nemichina kuti ibudise iyo yepamusoro yepamusoro wiricheya. Nekuda kwechikonzero ichi, kugadzira mawiricheya inotora nguva uye inowedzera kukosha. Izvi zvinokonzera mitengo kuve yakakwira kupfuura zvigadzirwa senge pavhareji bhasikoro.
Chii chinonzi yoga wiricheya?
Ndeipi Imbwa Yakanyanya Kukodzera Kune Munhu MuWheelchair?